I-St Peter's Cottage, emaphandleni ase-Essex
Indlu entsha yokwakha kwindawo ebalaseleyo emaphandleni. Isiqingatha seehektare (2000 m2) igadi erhangqwe ngamabala avulekileyo anemibono ngaphaya kwentlambo yoMlambo iBlackwater macala onke. Le ndlu ikufuphi nesikhumbuzo sakudala seCawa yaseSt Peter, eyaqala ngenkulungwane ye-11 kwaye ngoku sisitudiyo samagcisa eglasi.
Siyavuya kukwazi ukwenza ukuba i-cottage ifumaneke ngeeholide kunye neempelaveki ezinde kunye nethuba lokonwabela ukuzola kwale ndawo kwaye njengesiseko sokuhlola unxweme olubalaseleyo lwase-Essex kunye namaphandle. Kwaye kunye neLondon kumgama nje oyi-40mins kude ngololiwe ukusuka kwisikhululo sase-Witham (iikhilomitha ezi-2.5/4km) ikomkhulu lifikeleleka lula ukuze libonwe.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elinesicwangciso esivulekileyo kuwo wonke umgangatho wokuqala onegumbi lokuhlala elinesisa kunye nekhitshi lokutyela. Indawo ineefestile ezinkulu zemifanekiso eneembono phezu kwegadi, icawa ekufutshane kunye namabala angaphaya. Esi sisithuba esidibanisa nendalo kwaye siya kukuvumela ukuba ukonwabele esi silungiselelo sibalaseleyo nakweliphi na ixesha lonyaka nakweyiphi na imozulu.
Kumgangatho ophantsi kukho amagumbi okulala amathathu anobungakanani obuhle kunye negumbi lokuhlambela / indlu yangasese. Igumbi ngalinye lokulala linomlingiswa walo kwaye liziboleka kwindawo yokuhlala eguquguqukayo. Igumbi eliluhlaza linebhedi ephindwe kabini yenkosi; Igumbi elipinki kunye negumbi elibhlowu linokusekwa njengamawele okanye iibhedi ezimbini.
I-cottage ixhotyiswe ngefenitshala entsha, izixhobo kunye nezixhobo zombane kuyo yonke indawo, ikhethwe ukwenza yonke indawo yokuhlala ingabi nangxaki kwaye iphumle.
ISt Peter's ikufuphi neBlackwater Estuary eyindawo enobuhle bendalo obubalaseleyo kunye nobutyebi bemidlalo yasemanzini. IMaldon (i-3miles/5km), idume ngezikhephe zayo zokuhamba ngeenqanawa zaseThames, ii-pubs ezisecaleni kwamanzi kunye nezikhumbuzo zembali.
Iivenkile ezinkulu ezinamagama amakhulu zinokufumaneka eWitham naseMaldon kwaye kukho neendawo ezintle zokuthenga imveliso yasekhaya. Sicebisa ifama kaJacob eHaybridge apho imifuno neziqhamo zikhulela ekhaya.
Isixeko sakudala saseColchester kukuhamba ngemizuzu engama-30 kunye nenqaba yaseNorman, eyakhiwe kwindawo yetempile yaseRoma yakudala ingqokelela enika umdla yokulandela imbali yalo mmandla. I-Colchester Zoo yenye indawo enomtsalane yalapha ekukufaneleyo ukutyelelwa.
I-Cottage kulula ukuyisebenzisa, zonke izixhobo zombane zintsha, kwaye silindele ukuba awusayi kufuna uncedo olungakumbi ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa sikhona ukukunceda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wickham Bishops